အင်္ဂဝိဇ္ဇာ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
အင်္ဂဝိဇ္ဇာ	# အင်္ဂဝိဇ္ဇာအချိန်ပိုင်း အယူအဆကွဲများPublished May 30, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုသိန်းဖေသည် ကျွန်ုပ်ထံသို့ မကြာခဏ လာရောက်ခါ ဗေဒင်ပညာနှင့် ပတ်သက်ပြီး လေ့လာပညာယူ နေသူ တစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဘလော့တွင်ကိုလည်း အင်တာနက်တွင် ပုံမှန် ဖတ်ရှု နေသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်လေသည်။ ယနေ့သည် တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ အားလပ်ရက် ဖြစ်သောကြောင့် စောစောစီးစီး ပေါက်ချ လာလေသည်။
ကျွန်ုပ်။ ။ လာဗျို့။ ကိုသိန်းဖေ ဒီမှာ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ငါးကြော် မြီးကြရအောင်။ ကဲ – ဆို ။ ဘာသိချင်ပြန်ပြီလည်း။
သိန်း။ ။ ဒီလိုဆရာ။ ဟိုတစ်နေ့က မန်ယူ နဲ့ ဘာကာပွဲကို ဆရာတွက်ထားတာ မဟာကာလဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော် ချကြည့်တော့ ဆရာ့ခွင်အတိုင်း မဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါပါ။ (၂၄)ခါ ပိုင်းကို ဘယ်လိုပိုင်းပါသလဲဆရာ။
ကျွန်ုပ်။ ။အေးဗျ။ မဟာကာလမှာလည်း အချိန်ပိုင်းပုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အယူအဆအမျိုးမျိုးကွဲနေကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နည်းလမ်းစုံကို လေ့လာကြည့်တယ်။ မူလပထမအယူ အဆကတော့ နေ့ပိုင်း (၈)ခါ၊ ညပိုင်း (၈)ခါ – တစ်နေ့ကို (၁၆)ခါပိုင်းပေါ့ဗျာ။ တစ်ချိန်ကို တစ်နာရီခွဲယူတယ်ဆိုတာတော့ ကိုသိန်းဖေ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ နောက်တစ်ခုက သာမည ဆရာတော်ကြီးရဲ့ နည်းလို့ လူသိများတဲ့ (၅)ခါပိုင်းစနစ်။ ဒါကတော့ အသုံးနည်းပါတယ်။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged mahabote, Myanmar Astrology, မဟာဘုတ်, အင်္ဂဝိဇ္ဇာ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 1 Comment	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,660)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,366)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,199)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,021)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,050)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,359)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,186)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,701)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,741)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,397)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,354)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,193)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,153)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,132)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,455)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,402)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,046)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,904)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,749)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,747)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,290)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,893)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,776)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,740)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,607)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,556)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,350)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,152)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,116)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,045)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !